Letha idivayisi yakho > UVielhuber David
Letha idivayisi yakho07
Sekuvele kunzima ukukuziba uma ufuna ukusebenza ngokuvumelana nezimo nangokuzimela: ifu. Cishe kunabantu abaningi asebevele basebenzisa ifu benganakile. Ngokusakaza, isibonelo, konke okuqukethwe kugcinwa efwini futhi kungafinyelelwa lapho kudingeka. INetflix yisibonelo lapha esiya ngokuya sithandwa kakhulu eJalimane. Noma ukuvumelanisa kwama-PC wedeskithophu noma ama-laptops nawo wonke amadivayisi eselula nawo kwenzeka kakhulu ngefu.
I-computing yamafu iya ngokuya iqhamuka
Ezimpilweni zabo zangasese, abantu abaningi sebejabulela izinzuzo nenkululeko yefu. Futhi ukusebenza nefu kuhamba kancane kodwa ngokuqinisekile kuyazuza nasezinkampanini ezincane. Abahlinzeki abaningi bazivumelanisa nezidingo ezintsha zemakethe futhi bathuthukise imiqondo evumelana nezidingo zekhasimende. Lokho UDell BYOD Umgomo, ngokwesibonelo, indlela enhle yokuthi ungasebenza kanjani ngokunenjongo ngefu. I-BYOD imele ukuthi letha idivayisi yakho ngakho-ke icishe izichaze yona. Abasebenzi basebenzisa amadivaysi abo ayimfihlo ukuze bafinyelele idatha yenkampani egcinwe lapho noma yikuphi ngefu. Namuhla sesivele sikujwayele ukusebenzisa ithebhulethi noma i-smartphone yethu ukuze singene ku-inthanethi futhi sihlole ama-imeyili ethu ngenkathi sisendleleni. Futhi abaningi bahlola nama-imeyili ebhizinisi ngaphandle kwamahora abo okusebenza futhi, kuye ngokuphuthuma, bawaphendule ngokushesha. Umgomo we-BYOD manje welula yonke into kwezinye izindawo. Khona-ke awukwazi ukuhlola ama-imeyili ebhizinisi kuphela, kodwa futhi ufinyelele wonke amafayela nolwazi oluhlobene nomsebenzi, kungakhathaliseki ukuthi ukuphi.
Ukuguquguquka okukhulu ngokwefu
Ngakho-ke abasebenzi bavumelana nezimo kakhulu ngokwendawo yabo yokusebenza namahora abo okusebenza. Futhi sekukhona izifundo ezifakazela ukuthi lesi simiso sikhulisa ukukhiqiza nokusebenza kahle kwenkampani kakhulu. Abantu abaningi ngokwengeziwe manje sebekwazi ukusebenzela ekhaya. Ukuqeda uhambo olucasulayo oluya ehhovisi kusindisa isikhathi esiningi nezinzwa futhi ngaleyo ndlela kudala amandla amasha namandla ongawatshala emsebenzini wakho esikhundleni salokho. Ngazo zonke izinzuzo, umuntu kufanele futhi acabange ngokuphepha. Imininingwane yenkampani eyimfihlo kakhulu manje isisendaweni ethile ku-inthanethi ngakho-ke ngokuvamile ifinyeleleka kunoma ubani onokufinyelela i-inthanethi. Yebo zikhona izindlela nezindlela zokuvikela idatha yakho, okumele kube yisibopho somhlinzeki. Lapha ungakwazi ukuzivikela ngamagama abasebenzisi, amagama ayimfihlo kanye nama-firewall. Endabeni yezinsizakalo zamafu, idatha ivame ukuhlinzekwa nge-a Ukuqinisekiswa kwezinto eziningi ivikelekile. Uma wethemba futhi ungancika kumhlinzeki wesevisi, kufanele wamukele izinzuzo eziningi ze-cloud computing futhi ufunde ukuzisebenzisa ngokunenzuzo. Futhi abasebenzi bazokwamukela ngenjabulo inkululeko yabo entsha kanye nokuvumelana nezimo ezintsha futhi babuyisele ukwethenjwa okubekwe kubo ngomsebenzi omuhle futhi bakhiqize kakhudlwana kunangaphambili. Ngaphezu kwalokho, izindleko eziphansi kakhulu zokuthola nokunakekela uma kuqhathaniswa nesistimu yeseva ehlukile zikhulumela ifu.